“Every Day may not be good but there is something good in everyday” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ပြက္ခဒိန်မှာ ရက်ရာဇာတွေ ပြဿဒါးတွေ သတ်မှတ် ထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့သာ နေတတ်မယ်ဆိုရင် နေ့ရက်တိုင်းက အမြဲ ရက်ရာဇာတွေကြီးပါပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက Good Day တွေ Bad Day တွေ ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ Attitude ကသာ သတ်မှတ်တာပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Optimistic အမြင်နဲ့ ရေ တဝက်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပဲ တွေးကြသလိုပေါ့။
Sale and Marketing: Tips for Starter
“The Difference between Sales and Marketing is that Marketing owns the message and Sales own the relationship.” လို့ John Jantsch ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ Startup Business တစ်ခုအတွက် Marketing စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေ နှစ်ရပ်က Competitors ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်။ Customer တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရမယ်။ ဆိုတော့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ Startups တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မိမိရဲ့ Product ကို Customer ကို ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့် Product နဲ့အတူ စားသုံးသူတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေရမှာပါ။
Productivity Vs Time Management
တခါတလေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကိုယ်ဒီနေ့ ဘယ် Task တွေပြီးရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါရဲ့ Productive မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘဲ Mind-Numbing Work Days တွေကြီးနဲ့ပဲ ရက်ဆက် ဖြတ်သန်း ကြုံနေကြဖူးလား? အများစုကတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ တခါတလေ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ အကြောင်းပြချက် မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲကို ဘယ်လိုမှ Productive မဖြစ်တော့တာမျိုးပေါ့။ ဒီလို မကြာခဏ ဖြစ်နေတယ်၊ ဖြစ်ဖူးတယ်ဆို ဘာကြောင့် ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာကြည့်ကြဖူးလားဗျ။ ယေဘုယျအဆန်ဆုံး အဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Time Management လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲတာ ညံ့ဖျင်းလို့ပါ။
နေ့စဉ်ဘဝမှာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျလောက်အောင် ခေါင်းကိုက်ချင်စရာ၊ သူတို့ရှိနေရင်ကို Motivation တွေပျောက်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်းချင်စရာဖြစ်စေတဲ့ လူမျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ဖူးကြလား ? ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီခံစားချက်ကို ကောင်းကောင်း နားလည်ကြလောက်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှာ ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက် ဘဝအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမယ့် လူမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ယောက်မကတော့ အနည်းဆုံး ရှိတတ်ကြတာချည်းပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ Stress တွေကို Success ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြမလဲ?
“The key to winning is poise under stress.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်အပါအဝင် လူအများစုမှာ တူညီတာတစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့် Career မှာ Success ဆိုတဲ့ အောင်မြင်မှုကို တောင့်တကြသလောက် Stress ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတော့ ခံနိုင်ရည် မရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Successful Career နဲ့ Stressful Life ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများတော့ ဒွန်တွဲနေကြတာချည်းပါပဲ။ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် Stress ဖြစ်တယ်။ ဖြေရှင်းလို့ရပြန်တော့လည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီး Stress ဖြစ်ပြန်တယ်လေ။ နေ့စဉ် ဘဝထဲမှာ မလွဲမသွေ ကြုံနေရတဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ စိတ်အလိုမကျမှုတွေ အကုန်လုံးကလည်း စိတ်မထားတတ်သူအတွက်တော့ Stress တွေပါပဲ။
သင်တန်းတက်ရတာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိဖို့
သင်တန်းတက်ရတာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိဖို့ ယခုခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများစုက သင်တန်းမျိုးစုံ တက်ကြသည်။ တချို့သင်တန်းတွေက အခကြေးငွေ ပေးရသလို၊ တချို့တွေက အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကိုယ့်အလုပ်ဌာနတွေက အခမဲ့ စီစဉ်ပေးတာမျိုးဖြစ်သည်။ သင်တန်းတက်ရသော အကြောင်းပြချက်များကိုကြည့်လျှင် ပညာယူချင်လို့၊ လက်တွေ့တတ်ချင်လို့၊ သူငယ်ချင်းတွေတက်လို့ လိုက်တက်ဖြစ်တာ၊ လက်မှတ် (certificate) ရချင်လို့၊ မိဘတွေ အလုပ်ရှင်တွေက တက်ခိုင်းလို့ စသဖြင့် ကွဲပြားကြသည်။
ပညာယူသည်ဆိုရာဝယ် မကြာသေးခင်က နိုင်ငံခြားမှာ တက္ကသိုလ်တက်နေကြသော မြန်မာကျောင်းသားတချို့နှင့် ပညာရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးမိကြသည်။ သူတို့အမြင်မှာ ပညာရေးဟာ ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းနှင့် အောင်ဖို့အတွက်ပဲ တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်နေပြီး ကျောင်းသားတွေ၏ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ကို အားပေးမှု မရှိသလို ဖြစ်နေသည်။ နောက်ပြီး တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကိုယ်တက်ချင်သော ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်ခွင့် များများပေးရင် ကောင်းမယ်ဟု သူတို့က ပြောကြသည်။ သင်ကြားနေသော တချို့ဆရာများက ကျောင်းသားကို သေချာ နားလည်အောင် မရှင်းပြနိုင်တာတွေ၊ ကျောင်းသားကို သင်ခန်းစာမှာ စိတ်ဝင်စားလာအောင် မလုပ်နိုင်တာတွေကိုလည်း ထောက်ပြကြသည်။
ဘဝအတွက်ရည်ရွယ်ချက် လူအများစုက ဘဝအတွက် ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ တချို့တွေက ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ကြသည်၊ ချမ်းသာချင်ကြသည်။ နာမည်ကြီးချင်ကြသည်။ တချို့ကတော့ ဘဝကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ ဖြတ်သန်းလိုကြသည်။ တချို့ကတော့ ဘဝကို လွယ်လွယ်တွေးပြီး၊ ပေါ့ပေါ့လေး ဖြတ်သန်းချင်ကြသည်။ တချို့တွေအတွက် ဘဝက အစစအရာရာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး ဖြောင့်ဖြူးသည်။ တချို့တွေအတွက် အခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကြိုးစားရသည်။
ဆရာ ဆရာမများ နဲ့ ပညာရေးစနစ်တို့ရဲ့ တန်ပြန် သက်ရောက်မှုများ
ဆရာ ဆရာမများ နဲ့ ပညာရေးစနစ်တို့ရဲ့ တန်ပြန် သက်ရောက်မှုများ ပြီးခဲ့တဲ့ Insead Leadership Summit မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ လီကွမ်ယုက နောက်ဆုံးထွက် The Economist မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ပညာရေးစနစ်တွေအကြောင်း သုံးသပ်ထားတဲ့ McKinsey Report ပေါ် အခြေခံထားတဲ့ အာတီကယ်လ် တခုအကြောင်း ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီ Report ရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် သုံးသပ်ချက်ကတော့ .. နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပညာရေးအဆင့်အတန်းကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာ ၊ အတန်းတစ်တန်းမှာ ကျောင်းသားဦးရေ ဘယ်နှယောက်ရှိတာ ၊ ဘယ်လိုစာမေးပွဲမေးခွန်းတွေ ထုတ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ ၊ အောက်ပါအချက်များနဲ့ ပိုသက်ဆိုင် လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ..
ဆရာဆိုတာ ... (ဆရာနှင့်ပညာရေး - အပိုင်း ၁)
ဆရာဆိုတာ ... (ဆရာနှင့်ပညာရေး - အပိုင်း ၁) ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ပညာရေးသုတေသီတွေပါဝင်တဲ့ McKinsey ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာလို့ တချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ ကျောင်းပညာရေးစနစ်တွေကအောင်မြင်ပြီး တချို့က မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကို သုသေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်  ။ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းပေါင်း ၂၅ ကျောင်း (ထိပ်တန်း ၁၀ ကျောင်းအပါအဝင်) ကို သူတို့ လေ့လာခဲ့ကြတယ် ။ သူတို့ကောက်ချက်ချတဲ့ ကျောင်းပညာရေးစနစ် အောင်မြင်ဖို့ အဓိကသုံးချက်ထဲမှာ ထိပ်တန်းကပါဝင်တဲ့အချက်ကတော့ အရည်အချင်းပြည့်စုံပြီး လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေရအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ ။